DataNumen: Amụma nzuzo
(A) Iwu a
Iwu a sitere n’aka ndị ụlọ ọrụ edepụtara na Nkebi nke M n’okpuru (ọnụ, “DataNumen”,“ Anyị ”,“ anyị ”ma ọ bụ“ nke anyị ”). A na-agwa ndị mmadụ okwu na-abụghị nzukọ anyị ka anyị na ha na-emekọrịta ihe, gụnyere ndị ọbịa na webụsaịtị anyị (weebụsaịtị anyị), ndị ahịa, na ndị ọrụ ndị ọzọ nke Ọrụ anyị (ọnụ, "gị"). A kọwara okwu akọwapụtara maka Iwu a na Nkebi (N) n'okpuru.
Maka ebumnuche nke Iwu a, DataNumen bụ Njikwa nke Data Nkeonwe Gị. Enyere nkọwa kọntaktị na Nkebi (M) n'okpuru maka ngwacable DataNumen kwadoro nwere ike ịza ajụjụ gbasara ojiji na nhazi data nkeonwe gị.
Enwere ike imezigharị Iwu a ma ọ bụ emelitere site n'oge ruo n'oge iji gosipụta mgbanwe n'omume anyị n'ihe gbasara Usoro nke Ozi Nkeonwe, ma ọ bụ mgbanwe na ngwacable iwu. Anyị na-agba gị ume ka ị gụọ Iwu a nke ọma, yana ịlele oge a ka ị nyochaa mgbanwe ọ bụla anyị nwere ike ime dịka usoro nke Iwu a.
DataNumen na-arụ ọrụ n'okpuru akara ndị a: DataNumen.
(B) Nhazi data nkeonwe gị
Nchịkọta nke Data Nkeonwe: Anyị nwere ike ịnakọta data gbasara gị:
Mgbe ị kpọtụrụ anyị site na email, ekwentị ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla.
N'ime usoro mmekọrịta anyị na gị (dịka, Personal Data anyị na-enweta n'oge ịnye ụgwọ gị).
Mgbe anyị nyere Ọrụ.
Mgbe anyị natara Ozi Nkeonwe gị site na ndị ọzọ na-enye anyị ya, dị ka ụlọ ọrụ na-ekwu maka kredit ma ọ bụ ndị ọrụ mmanye iwu.
Mgbe ị gara na webụsaịtị anyị ọ bụla ma ọ bụ jiri atụmatụ ma ọ bụ akụ ọ bụla dị na ma ọ bụ site na Weebụsaịtị anyị. Mgbe ị gara na weebụsaịtị, ngwaọrụ gị na ihe nchọgharị gị nwere ike igosipụta ụfọdụ ozi na akpaghị aka (dịka ụdị ngwaọrụ, sistemụ arụmọrụ, ụdị ihe nchọgharị, ntọala ihe nchọgharị, adreesị IP, ntọala asụsụ, ụbọchị na oge ijikọ weebụsaịtị na ozi nkwukọrịta ndị ọzọ) , ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ Data nkeonwe.
Mgbe ị nyefere gị malitegharịa / CV anyị maka a ọrụ ngwa.
Okike nke Onwe Onye: N'inye Ọrụ anyị, anyị nwekwara ike ịmepụta Data nkeonwe gbasara gị, dịka ndekọ nke mmekọrịta gị na anyị na nkọwa nke usoro usoro gị.
Data nkeonwe dị mkpa: Uzo nke Data Nkeonwe banyere gi nke anyi nwere ike isi tinye:
Nkọwa onwe onye: aha (aha); okike; ụbọchị ọmụmụ / afọ; mba; na foto.
Nkọwa kọntaktị: adreesị mbupu (ịmaatụ, maka ịlaghachi mgbasa ozi mbụ na / ma ọ bụ ngwaọrụ nchekwa); peeji nkeostadreesị ọ bụla; nọmba ekwentị; adreesị ozi ịntanetị; na profaịlụ profaịlụ nke ndi mmadu.
Kwụ ụgwọ nkọwa: Adreesị Ịgba Ụgwọ; nọmba ego ụlọ akụ ma ọ bụ nọmba kaadị akwụmụgwọ; onye nwe kaadi ma ọ bụ onye nwe akaụntụ; kaadị ma ọ bụ nkọwa nchekwa akaụntụ; kaadị 'dị ire site na' ụbọchị; na kaadị mmebi ụbọchị.
Echiche na echiche: echiche ọ bụla na echiche ị họọrọ izigara anyị, ma ọ bụ n'ihu ọha post banyere anyị na ntanetị mgbasa ozi.
Biko rịba ama na Data nkeonwe gbasara gị nke anyị na-arụ nwere ike ịgụnye Mmetụta Nkeonwe Nkọwa dịka akọwapụtara n'okpuru.
Iwu kwadoro maka ịhazi data nkeonwe: N'ime nhazi data nkeonwe gị na ebumnuche ndị edepụtara na Iwu a, anyị nwere ike ịdabere na otu ma ọ bụ karịa n'ime ntọala iwu ndị a, dabere n'ọnọdụ ndị a:
anyị enwetala nkwenye gị kwupụtara na nhazi (a ga-eji ihe ndabere iwu a n'ihe metụtara nhazi nke zuru oketary - ejighi ya maka Nhazi nke dị mkpa ma ọ bụ iwu n'ụzọ ọ bụla);
Nhazi ahụ dị mkpa na nkwekọrịta ọ bụla ị nwere ike ịbanye na anyị;
na nhazi a chọrọ site na ngwacable iwu;
Nhazi ahụ dị mkpa iji kpuchido ọdịmma dị mkpa nke onye ọ bụla; ma ọ bụ
anyị nwere mmasị dị mma n'ịrụ Ọrụ ahụ maka nzube nke ijikwa, ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịkwalite azụmahịa anyị, na ọdịmma ziri ezi abụghị nke ọdịmma gị, ikike ndị bụ isi, ma ọ bụ nnwere onwe.
Nhazi data onwe gị nke nwere mmetụta: Anyị anaghị achọ ịnakọta ma ọ bụ na uzọ ọzọ Nhazi data nkeonwe gị, belụsọ ebe:
Usoro a chọrọ ma ọ bụ kwere site na ngwacable iwu (dịka, iji soro ọrụ dị iche iche anyị na-akọ);
Nhazi ahụ dị mkpa maka nchọpụta ma ọ bụ igbochi mpụ (gụnyere igbochi aghụghọ, mpụ ego na iyi ọha egwu);
Usoro ahụ dị mkpa maka nhazi, mmega ahụ ma ọ bụ ịgbachitere ikike iwu; ma ọ bụ
anyị nwere, dị na ngwacabIwu, nwetara nkwenye gị doro anya tupu ịhazi data nke onwe gị (dị ka nke dị n'elu, a na-eji usoro iwu a eme ihe n'ihe metụtara Nhazi nke zuru oketary - ejighi ya maka Nhazi nke dị mkpa ma ọ bụ iwu n'ụzọ ọ bụla).
Ọ bụrụ na ị nyere anyị Data Onwe Mmetụta (dịka, ọ bụrụ na ị nyere anyị ngwaike nke ịchọrọ ka anyị weghachite data) ị ga-ahụrịrị na ọ bụ ihe ziri ezi ka ị kpughere anyị ụdị data ahụ, gụnyere ijide n'aka na otu n'ime ntọala iwu nke edepụtara n'elu dịịrị anyị maka nhazi nke data nke onwe onye ahụ.
Ebumnuche nke anyị nwere ike ịhazi data nkeonwe gị: Ebumnuche nke anyị nwere ike ịhazi data nkeonwe, dabere na ngwacabIwu iwu, gunyere:
Weebụsaịtị anyị: ịrụ ọrụ na ijikwa weebụsaịtị anyị; inye ọdịnaya gị; igosipụta mgbasa ozi na ozi ndị ọzọ nye gị mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị; ma na-ekwurịta okwu ma na-emekọrịta ihe site na weebụsaịtị anyị.
Inye Ọrụ: inye Weebụsaịtị anyị na Ọrụ ndị ọzọ; inye Ọrụ na nzaghachi nye iwu; na nkwukọrịta gbasara Ọrụ ndị ahụ.
Ozi: na-agwa gị okwu site n'ụzọ ọ bụla (gụnyere site na email, ekwentị, ozi ederede, mgbasa ozi mmekọrịta, post ma obu na mmadu) dabere na ijide n'aka na enyere gi nkwukọrịta dị otu acable iwu.
Nkwukọrịta na ọrụ IT: njikwa nke usoro nkwukọrịta anyị; ọrụ nke nchekwa IT; na nyocha nchedo IT.
Ahụike na nchekwa: nyocha ahụike na nchekwa na idebe ndekọ; na nnabata iwu metụtara ya.
Ijikwa ego: ire; ego; nyocha ụlọ ọrụ; na njikwa ndị na-ere ahịa.
Nyocha: na-esonyere gị maka ebumnuche nke inweta echiche gị na Ọrụ anyị.
Imeziwanye Ọrụ Anyị: ịchọpụta nsogbu dị na Ọrụ ndị dị adị; atụmatụ ndozi maka Ọrụ ndị dịnụ; na ịmepụta Ọrụ ọhụrụ.
Ndị ọrụ nchịkwa mmadụ: nchịkwa nke ngwa maka ọnọdụ na anyị.
Voluntary ndokwa nkeonwe nkeonwe na nsonaazụ nke enweghị ndokwa: Ndokwa nke Personal Data gị nyere anyị oketary ga-abụkarị ihe achọrọ iji dị mkpa iji soro anyị banye nkwekọrịta ma nyere anyị aka imezu nkwekọrịta anyị na gị. Nweghị iwu ọ bụla inye gị data nkeonwe gị; Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kpebie ịghara inye anyị data nkeonwe gị, anyị agaghị enwe ike ịmekọrịta mmekọrịta gị na gị yana iji mezuo ọrụ nkwekọrịta anyị n'ebe ị nọ.
(C) Ngosipụta nke Ozi Nkeonwe na ndị ọzọ
Anyị nwere ike igosipụta Data nkeonwe gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'ime DataNumen, iji mezuo nkwekọrịta anyị na gị na gị ma ọ bụ maka ebumnuche azụmaahịa ziri ezi (gụnyere ịnye gị Ọrụ na ịwa nrụọrụ anyị), dabere na ngwacable iwu. Na mgbakwunye, anyị nwere ike igosipụta Data nkeonwe gị na:
ndị isi iwu na iwu, mgbe ha rịọrọ, ma ọ bụ maka ebumnuche ịkọ akụkọ mmekpa ahụ ọ bụla dabara adaba nke ngwacable iwu ma obu iwu;
ndị na-edekọ ego, ndị nyocha, ndị ọka iwu na ndị ọkachamara ndị ọzọ na-abụghị ndị ndụmọdụ DataNumen, n'okpuru nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ iwu iwu nke nzuzo;
ndị na-arụ ọrụ nke atọ (dịka ndị na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ; ụlọ ọrụ mbupu / ndị na-ebu ozi; ndị na-eweta teknụzụ, ndị na-eweta nyocha afọ ojuju ndị ahịa, ndị na-arụ ọrụ "ndụ-nkata" yana ndị na-arụ ọrụ na-enye ọrụ nnabata dị ka ịlele ndepụta gọọmentị amachibidoro, dị ka US Office for Njikwa Akụ Ofesi), nke dị ebe ọ bụla n'ụwa, dabere na ihe ndị achọrọ n'okpuru n'okpuru Nkebi nke a (C);
otu ọ bụla dị mkpa, ụlọ ọrụ mmanye iwu ma ọ bụ ụlọ ikpe, ruo n'ókè dị mkpa maka nguzobe, mmega ahụ ma ọ bụ ịgbachitere ikike iwu, ma ọ bụ akụkụ ọ bụla dị mkpa maka ebumnuche nke mgbochi, nyocha, nchọpụta ma ọ bụ ịkpe ikpe mmebi iwu ma ọ bụ mmebi iwu nke mpụ;
ndị ọzọ nwetara (s) dị mkpa, ma ọ bụrụ na anyị ere ma ọ bụ bufee ihe niile ma ọ bụ akụkụ ọ bụla dị mkpa nke azụmaahịa anyị ma ọ bụ akụ anyị (gụnyere ọ bụrụ na a hazigharị, gbasaa ma ọ bụ mmiri mmiri), mana ọ bụ naanị dịka ngwa ahụ si dịcable iwu; na
Weebụsaịtị anyị nwere ike iji ọdịnaya ndị ọzọ. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịmekọrịta ụdị ọdịnaya a, enwere ike ịkekọrịta Personal Data gị na ndị ọzọ na-eweta nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị mkpa. Anyị na-akwado ka inyocha iwu nzuzo onye nke atọ ahụ tupu ịmekọrịta ọdịnaya ya.
Ọ bụrụ na anyị etinye aka na Usoro nhazi nke atọ iji hazie data nkeonwe gị, anyị ga-ekwubi nkwekọrịta nkwekọrịta data dị ka ngwa ahụ chọrọcable iwu na onye nhazi ndị ọzọ dị otú ahụ nke mere na onye nhazi ahụ ga-edo onwe ya n'okpuru iwu nkwekọrịta: (i) naanị Usoro nkeonwe nke Onye ahụ dịka ntuziaka edere anyị edepụtara; na (ii) jiri usoro iji kpuchido nzuzo na nchekwa nke Personal Data; yana ihe ọ bụla ọzọ achọrọ n'okpuru ngwacable iwu.
Anyị nwere ike zoo aha nkeonwe gbasara ojiji nke Weebụsaịtị (dịka, site na ịdekọ data dị otú ahụ na mkpokọta usoro) ma soro ndị mmekọ azụmaahịa anyị (gụnyere ndị mmekọ azụmaahịa nke atọ) kerịta ụdị data ahụ.
D) Ntughari nke Onwe Onye nke Mba
Maka ụdị azụmahịa anyị na mba ụwa, anyị nwere ike ị nyefee data nkeonwe gị n'ime DataNumen Otu, na ndị ọzọ dịka e kwuru na Nkebi (C) nke dị n'elu, n'ihe metụtara ebumnuche ndị akọwapụtara na Iwu a. Maka nke a, anyị nwere ike ịnyefe Ozi Nkeonwe gị na mba ndị ọzọ nwere ike ịnwe ụkpụrụ dị ala maka nchekwa data karịa EU n'ihi iwu dị iche iche na nnabata nnabata data echedoro ndị metụtara na mba ị nọ.
Ebee ka anyị bufere Ozi Nkeonwe gị na mba ndị ọzọ, anyị na-eme ya, ebe achọrọ (ma ewezuga ịnyefe site na EEA ma ọ bụ Switzerland na US) na ndabere nke Usoro Nkwekọ ọkọlọtọ. Nwere ike ịrịọ otu ụdị Usoro Nkwekọrịta Nkwekọrịta anyị site na iji nkọwa kọntaktị enyere na Nkebi (M) n'okpuru.
(E) Nche data
Anyị etinyegoro usoro nchekwa na nhazi nke dabara adaba iji chedo Personal Data gị maka mbibi na mberede ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, ọnwụ, ngbanwe, nkwupụta na-enwetaghị ikike, ohere na-akwadoghị, na ụdị usoro nhazi ọzọ ma ọ bụ na-akwadoghị, dịka ngwacable iwu.
Na-ahụ maka ijide n'aka na ozi nkeonwe ọ bụla ị zitere anyị zigara na nzuzo.
(F) Data ziri ezi
Anyị na-eme ezi uche ọ bụla iji hụ na:
Ozi Nkeonwe gị nke anyị na-arụ na-ezi ezi na, ebe ọ dị mkpa, edobere ya oge niile; na
ọ bụla nke Personal Data gị nke anyị na-arụ nke na-ezighi ezi (na-echebara ebumnuche ha ji rụọ ya) anya ma ọ bụ mezie ya n'egbughị oge.
Site n'oge ruo n'oge anyị nwere ike ịjụ gị ka ị kwado izi ezi nke Personal Data gị.
(G) Mbelata data
Anyị na-eme ihe ọ bụla ezi uche dị na ya iji hụ na Personal Data nke anyị na-arụ nwere oke na Personal Data nke ezi uche dị na ya maka ebumnuche akọwapụtara na Iwu a (gụnyere inye gị Ọrụ).
(H) Njide data
Anyị na-eme usoro ọ bụla ezi uche dị na ya iji hụ na a na-edozi data nkeonwe gị maka oge kachasị dị mkpa maka ebumnuche ndị edepụtara na Iwu a. Anyị ga-ejigide otu data nkeonwe gị n'ụdị na-enye ikikere njirimara naanị ogologo oge:
anyị na-ejigide mmekọrịta gị na gị (dịka, ebe ị bụ onye ọrụ nke ọrụ anyị, ma ọ bụ tinye ya na iwu anyị na ndepụta nzipu ozi gị wee wepu aha ya); ma ọ bụ
Ozi nkeonwe gị dị mkpa maka ebumnuche ziri ezi nke akọwapụtara na Iwu a, nke anyị nwere ezigbo iwu kwadoro (dịka, ebe etinye data nkeonwe gị n'usoro nke onye were gị n'ọrụ nyere, anyị nwere mmasị ziri ezi na nhazi data ndị ahụ maka ebumnuche nke ị na-arụ ọrụ anyị ma na-arụkwa ọrụ dịịrị anyị n'okpuru nkwekọrịta ahụ).
Na mgbakwunye, anyị ga-ejigide data nkeonwe maka oge:
ngwa ọ bụlacable mmachi oge n'okpuru ngwacabIwu iwu (yabụ, oge ọ bụla mmadụ ọbụla nwere ike iweta akwụkwọ iwu megide anyị n'ihe metụtara Ozi Nkeonwe gị, ma ọ bụ nke Nkeonwe Gị nwere ike ịdị mkpa); na
ọnwa abụọ ọzọ (2) ọnwa na-eso ngwụsị nke ụdị ngwa ahụcable mmachi oge (nke mere na, ọ bụrụ na mmadụ eweta nkwupụta na njedebe nke oge mmachi, anyị ka na-enye oge a ga-eji mata nke ọ bụla Personal Data dị mkpa na nkwupụta ahụ),
Ọ bụrụ na ewepụtara iwu ọ bụla metụtara iwu, anyị nwere ike ịga n'ihu na-edozi data nkeonwe gị maka oge ndị ọzọ dị mkpa maka nkwupụta ahụ.
N'ime oge edepụtara n'elu n'ihe metụtara nkwupụta iwu, anyị ga-amachi Nhazi nke Data Nkeonwe gị na nchekwa nke, na nchekwa nchekwa nke, Nkeonwe Nkeonwe, belụsọ na ekwesịrị inyocha Personal Data n'ihe metụtara nke ọ bụla iwu na-ekwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọrụ n'okpuru applicable iwu.
Ozugbo oge n'elu, onye ọ bụla ruo n'ókè applicabLe, kwubiri, anyị ga-ehichapụ ma ọ bụ bibie data nkeonwe dị mkpa kpamkpam.
(I) Ikike gi dika iwu kwadoro
Isiokwu iji ngwacabIwu, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ikike gbasara nhazi nke Data Nkeonwe gị, gụnyere:
ikike ịrịọ maka, ma ọ bụ mbipụta nke, Personal Data gị nke anyị na-arụ ma ọ bụ na-achịkwa, yana ozi gbasara ọdịdị, nhazi na ngosipụta nke Personal Data ndị ahụ;
ikike iji rịọ mmezi nke ezighi ezi ọ bụla na Personal Data gị nke anyị na-arụ ma ọ bụ na-achịkwa;
ikike iji rịọ, na ntọala ziri ezi:
nhichapụ nke Ozi Nkeonwe gị nke anyị na-arụ ma ọ bụ na-achịkwa;
ma ọ bụ mgbochi nke nhazi nke Personal Data gị nke anyị na-arụ ma ọ bụ na-achịkwa;
ikike ịjụ, na ntọala ziri ezi, na nhazi nke Personal Data gị site n'aka anyị ma ọ bụ na nnọchite anyị;
ikike inwe Personal Data gị nke anyị na-arụ ma ọ bụ na-achịkwa ka a kpọfere onye njikwa ọzọ, ruo n'ókè ngwacable;
Ikike ịhapụ nkwenye gị na nhazi, ebe iwu nke nhazi dabere na nkwenye; na
ikike iji mkpesa tinye na Ngalaba Nchedo Data gbasara nhazi nke Data Nkeonwe gị site n'aka anyị ma ọ bụ na nnọchite anyị.
Nke a anaghị emetụta ikike gị n'ụzọ iwu kwadoro.
Iji gosi otu ma ọ bụ karịa nke ikike ndị a, ma ọ bụ ịjụ ajụjụ gbasara ikike ndị a ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke Iwu a, ma ọ bụ banyere Nhazi nke Nkeonwe Gị, biko jiri nkọwa kọntaktị enyere na Nkebi (M) n'okpuru.
Ọ bụrụ na anyị na-enye gị Ọrụ dabere na iwu, ụdịrị ọrụ a na-achịkwa usoro nkwekọrịta enyere gị. Ọ bụrụ na ọdịiche dị n'etiti okwu ndị a na Iwu a, Iwu a bụ ndị kachasị elutary.
Kuki bụ obere faịlụ etinye na ngwaọrụ gị mgbe ị gara na weebụsaịtị (gụnyere weebụsaịtị anyị). Ọ na-edekọ ozi gbasara ngwaọrụ gị, ihe nchọgharị gị na, n'ọnọdụ ụfọdụ, mmasị na omume nchọgharị gị. Anyị nwere ike ịhazi data nkeonwe gị site na teknụzụ kuki, dịka nke anyị kuki Policy.
(K) Usoro Ojiji
All ojiji nke anyị weebụsaịtị bụ isiokwu anyị Usoro ojiji.
(L) Directzụ ahịa
Isiokwu iji ngwacable iwu, ebe i nyere nkwenye doro anya dika ngwa acabIwu ma ọ bụ ebe anyị na-ezitere gị mgbasa ozi na nkwukọrịta ahịa metụtara ngwaahịa na ọrụ ndị yiri ya, anyị nwere ike ịhazi data nkeonwe gị iji kpọtụrụ gị site na email, ekwentị, ozi ziri ezi ma ọ bụ usoro nkwukọrịta ndị ọzọ iji nye gị ozi ma ọ bụ Ọrụ ndị nwere ike ịbụ nke mmasị gị. Ọ bụrụ na anyị nye gị ọrụ gị, anyị nwere ike izitere gị ozi gbasara Ọrụ anyị, nkwalite na ozi ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị, na-eji nkọwa kọntaktị nke ị nyere anyị ma na-erubere ngwacable iwu.
Nwere ike wepu aha na ndepụta email nkwado ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ anyị n'oge ọ bụla site na ịpị njikọ njikọ wepu aha na email ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ anyị zitere. Mgbe ị wepụrụ aha, anyị agaghị ezitere gị ozi ịntanetị ọzọ, mana anyị nwere ike ịga n'ihu na-akpọtụrụ gị ruo n'ókè dị mkpa maka ebumnuche nke Ọrụ ọ bụla ị rịọrọ.
(M) Nkọwa kọntaktị
Ọ bụrụ na ị nwere nkwupụta ọ bụla, ajụjụ ma ọ bụ nchegbu gbasara ozi ọ bụla dị na Iwu a, ma ọ bụ nsogbu ọ bụla metụtara nhazi nke data onwe onye site na DataNumen, Biko kpọtụrụ anyị.
'Ihe njikwa' pụtara ihe kwadoro na-ekpebi otu na ihe kpatara eji arụ ọrụ nkeonwe. N'ọtụtụ ọchịchị, Onye Njikwa nwere ọrụ mbụ maka ịgbaso ngwacable iwu nchebe data.
'Nchịkwa Nchedo Data' putara onye oru ohaneze nwere onwe ya nke iwu kwadoro ka o dobe nnabata na ngwacable iwu nchebe data.
'EEA' pụtara European Economic Area.
'Ozi Nkeonwe' pụtara ozi gbasara mmadụ ọ bụla, ma ọ bụ nke a ga-amata onye ọ bụla. A na-enye ihe nlele nke Personal Data anyị nwere ike ịhazi na Nkebi (B) dị n'elu.
'Usoro', 'Nhazi' ma ọ bụ 'Hazie' pụtara ihe ọ bụla ejiri Personal Data ọ bụla mee, ma ọ bụ site na akpaaka, dị ka mkpokọta, ndekọ, nzukọ, ịhazi ihe, nchekwa, mmegharị ma ọ bụ mgbanwe, iweghachite, ịkpọtụrụ, iji, nkwupụta site na nnyefe, mgbasa ma ọ bụ na-eme ka ọ dị, nhazi ma ọ bụ nchikota, mmachi, nhichapụ ma ọ bụ mbibi.
'Nhazi' pụtara mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na-echekwa data onwe onye na nnọchite nke njikwa (ndị ọzọ karịa ndị ọrụ nke njikwa).
'Ọrụ' pụtara ọrụ ọ bụla enyere site na DataNumen.
'Mmetụta nke Onwe Nke Mmetụta' pụtara Data nkeonwe banyere agbụrụ ma ọ bụ agbụrụ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkwenkwe okpukpe ma ọ bụ nke nkà ihe ọmụma, otu ndị otu azụmahịa, ahụike anụ ahụ ma ọ bụ nke uche, ndụ mmekọahụ, mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ebubo mpụ ma ọ bụ ntaramahụhụ, nọmba njirimara mba, ma ọ bụ ozi ọ bụla ọzọ enwere ike ịbụ nwee mmetụta ọsọ ọsọ n'okpuru ngwacable iwu.